Matongerwo eNyika, 11 Kurume 2019
Vatungamiriri veZimbabwe neSouth Africa Vachaita Musangano Wekudyidzana Kwenyika Dzavo Mangwana
Mutungamiriri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, vasvika muZimbabwe kuzoita musangano nemutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, pamusoro pekudyidzana kwenyika mbiri idzi.
Pasi Rose Rochema Vanhu Vakashaya muNjodzi yeEthiopian Airlines
Chimwe chizvarwa chezimbabwe chinogara mu ethiopia uye chichishanda nevamwe vakarasikirwa nehupenhu munjodzi yendege ye ethiopian airways nezuro, muzvare sandra nyaira, vanoti njodzi iyi yatora nyanzvi zhinji dzichanetsa kutsiva.
Bato reDemocratic Party Roita Misangano neVari Kuda Kukwikwidza Sarudzo yeMutungamiri weAmerica
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, uye vari mukuru wezvirongwa zvevadzidzi vepamusoro soro, kana kuti Director of Graduate Programs paMalone University ku Ohio, Doctor Moses Rumano, vanoti misangano yakadai inoremekedzwa zvikuru mukusarudzwa kwevatungamiri venyika muAmerica.
Mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, Voshanyira Zimbabwe
Vanoongorora zvematongerwo enyika, uye vachidzidzisa paTswane University of Technology, Doctor Ricky Mukonza, vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru pachitariswa kudyidzana kwenyika mbiri idzi, uko kwagara kuripo.
MDC Inoti Manyepo Kuti VaChamisa Vakati Vanodyidzana naVaMugabe
Bato reMDC inotungamirirwa naVaNelson Chamisa rinoti manyepo ekuti mutungamiri waro neMugovera akati ari kushandidzana nevaimbove mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe.
Kurume 09, 2019
Mutungamiri weNyika VaMnangagwa Vanoti Zvirango zveAmerica Zviri Kutyora Kodzero dzeVana veZimbabwe
Vachitaura kumarinda eNational Heroes Acre muHarare pakuvigwa kwegamba renyika, Brigadier-General Emilio Munemo, VaMnangagwa vati nhaurirano dzekuti vadyidzane zvakare nedzimwe nyika, zvikuru dzekumawirira, dzicharamba dzichienderera mberi neavo vanovhurira nyika yavo magonhi avo.
Mutungamiri weMDC, VaChamisa, Votsiura Vatsigiri Vari Kurambidza Kuti Vakwikwidzwe
Izvi zvinotevera kusveeroredzwa kwaitwa vamwe vatungamiriri vebato iri nhasi vanofungidzirwa kuti vari kudawo chigaro china VaChamisa.